मान्छेले भन्दा आन्नदको जीवन जिउने चरिकोटको बोको, जसको जीवनशैली देखेर हुन्छन चकित पूरा पढ्नु होस ।। - Taja Report
Homeबिज्ञान प्रबिधिमान्छेले भन्दा आन्नदको जीवन जिउने चरिकोटको बोको, जसको जीवनशैली देखेर हुन्छन चकित पूरा पढ्नु होस ।।
मान्छेले भन्दा आन्नदको जीवन जिउने चरिकोटको बोको, जसको जीवनशैली देखेर हुन्छन चकित पूरा पढ्नु होस ।।
July 13, 2018 बिज्ञान प्रबिधि Comments Off on मान्छेले भन्दा आन्नदको जीवन जिउने चरिकोटको बोको, जसको जीवनशैली देखेर हुन्छन चकित पूरा पढ्नु होस ।।
दोलखा : दिनहुँ सयौं बोका काटिन्छन् । तर यी यस्ता बोका हुन् जसलाई कालगतिले बाहेक अन्य कारणले ज्यान गुमाउनु पर्दैन ।
उसले खोरमा थुनिएर पनि बस्नु पर्दैन । इच्छा लागेको ठाउँ जान्छ, केही भेटे जबर्जस्ती भए पनि खान्छ । जतिसुकै बदमासी गरे पनि मानिसले श्रद्धापूर्वक धपाउँछन् एक सिर्कानो हिर्काउने हिम्मतसम्म गर्दैनन् ।
भक्तजनले दोलखा बजारस्थित भीमेश्वरमा धर्मका लागि छाडिएका केही बोका छन्, जसले यस्तो बिन्दास दैनिकी गुजार्दै छन् ।
प्रत्येक वर्ष ५० को हाराहारीमा भीमेश्वरमा बोका छाडिन्छन् । अधिकांश भीमेश्वर मन्दिर वरपर चहार्दै जीवनयापन गर्छन् । केही त गाउँ र सहर पस्छन्, पर्यटकजस्तै ।
एउटा कालो बोका भने विगत ३ वर्षदेखि चरिकोटमा यस्तै ऐसको दैनिकी जिउँदै गरेको देख्न सकिन्छ । जति बोको हृस्टपुस्ट हुन्छ, त्यति नै काटिनका लागि तयार हुनुपर्ने नियतिलाई त्यसले चुनौती दिएको छ ।
मौका पाए कसैको घरको ओछ्यान र सोफामै आराम गरिदिन्छ । बजारमा बेच्न राखेको हरियोपरियो र फलफूल अन्नमाथि बिनात्रास हमला गर्दिन्छ । कतिपयले त धर्म हुन्छ भन्दै फलफूल र दाना दिन्छन् ।
उपद्रव र छिप्पिँदै गएको बोकाबाट निस्कने अनौठो गन्धबाट छुटकारा पाउन मानिसले पानी छ्यापेर लखेटिरहेका हुन्छन्, अरू केही सजाय दिँदैनन् ।साँझपख होटल संगमको अतिथिसदनको सोफामा आराम गरिरहेको बोकाबारे सञ्चालक सुन्दर कार्की भन्छन्, ‘प्राय: आउँछ, बस्छ, आफैं जान्छ, लखेट्न पर्दैन ।’
उक्त बोकाले खोरहरू चहार्दै बीउको बोकाको काम पनि नि:शुल्क गरिदिन्छ । बीउ लाउँदा लाग्ने खर्च जोगिनाले गाउँघरतिर त्यो पशु आएपछि प्रेमपूर्वक गोठतर्फ आकषिर्त गर्ने पनि भेटिन्छन् । बोकाकै जुनीमा रहनु त्यसका लागि अर्को फाइदा हो । ‘खसी’ भएर बेरस जिन्दगी बाँच्न त्यसले पर्दैन । बलि दिने हिन्दु मन्दिरमा छाडिएका बोका, गोरुलाई ‘खसी पार्न’ नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
भगवानको प्रसादका रूपमा छाडिएका बोकाले ‘साँढे’ को उपाधि पाएका हुन्छन् । भीमेश्वरका गुठियार डम्बरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार ०४० सालपछिबाट पशु मारेर मासु खान नरुचाउने भक्तजनले मनोकांक्षा पूरा होस् भन्दै गरेको भाकल बोका, भाले र हाँसलाई कुनै चिह्न लगाई छाड्न थालिएको हो ।
यसरी नै छाडिएकामध्ये त्यो बोकालाई पनि स्थापित हुनु मृत्युको सामुन्ने दुईपटक खडा हुनुपर्‍यो । केहीअघि चोरहरूले समातेर मासुका लागि बेच्न लाँदालाँदै प्रहरीले पक्राउ गर्दा ज्यान जोगिएको थियो ।
बढ्दै गएको साँढेले मन्दिरको वरपर फोहर पारेपछि प्रतिमामा संकल्प गरी नगद नै भगवान्लाई समर्पण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि साँढे छाड्ने क्रम नरोकिएको भीमेश्वर मन्दिर गुठी तथा पूजा व्यवस्थापन समिति कोषाध्यक्ष भरत श्रेष्ठ बताउँछन् । छाडिएकामध्ये कतिपयको दैनिकी मस्त देखिए पनि धेरैको भने विभिन्न कारणले मृत्यु हुने समिति अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले बताए ।
यी हुन् एक्लै बसेर मात्र हेर्न सकिने भिडियोहरु
बाघले मान्छेलाइ मारेपछि यसरी मारियो बाघलाई, हेर्नुहोस लाइभ भिडियो जुन बाघ मार्नलाई १ करोड ६० लाख खर्च र सयौ प्रहरी, आर्मी स्थानीयवासी लाग्नु पर्यो ! (भिडियो सहित)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (171)
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (38)